Nina Canacci 5139 Lace Cap Sleeve Sheath Gown (Size 14 only) - Harriman Clothing Co.
Nina Canacci 5139 Lace Cap Sleeve Sheath Gown (Size 14 only)
CAP SLEEVE FIT TO WAIST LACE GOWN
navy nylon / 0 / . navy nylon / 2 / . navy nylon / 4 / . navy nylon / 6 / . navy nylon / 8 / . navy nylon / 10 / . navy nylon / 12 / . navy nylon / 14 / . navy nylon / 16 / . navy nylon / 18 / . navy nylon / 20 / . navy nylon / 22 / . navy nylon / 24 / . navy nylon / 26 / .
Vendor: NINA CANACCI